Araho ny horonan-tsarinao Youtube | Martech Zone
Betsaka ny olona tsy mahatsapa an'io, fa Youtube manana fototra vitsivitsy Analytics ho anao hanaraka ny horonan-tsarinao. Raha te hahita ny olona mampiditra azy ireo ianao sy ny isan'ny mpilalao azony, dia tsotra ny mampiasa Youtube's. Insight fitaovana.
Voalohany, miditra amin'ny kaonty Youtube anao ary safidio ny iray amin'ireo horonan-tsarinao. Ho hitanao fa Insight bokotra eo amin'ny sisiny ankavanana:
Farany, mifidiana Discovery ary hahita menio safidy ianao:
Select Mpilalao embed ary ho hitanao ny lisitry ny tranonkala rehetra nampidirina tao amin'ilay horonan-tsary sy ny isan'ny fahitana azony tao:
Ity dia fitaovana tsara ho an'ny mpivarotra! Raha misy tranonkala iray maka ny iray amin'ireo horonan-tsarinao viraliny, ity dia fomba iray tsara hanarahana tsy ireo tranonkala liana ihany - fa ireo tranonkala izay mitondra fivezivezena kely ihany. Azonao atao koa ny misintona ireo antontan'isa ireo amin'ny alàlan'ny fisie CSV.
Tags: YouTubefanadihadihana youtubeyoutube marketingmetatra youtubefanarahana ny youtube
Fanafanana ny indostrian'ny finday
Ny fampiasana ny haino aman-jery sosialy dia tsy mahomby
Jul 14, 2009 amin'ny 3: 35 AM
Tena mahafinaritra izany, ary hampiana fanaraha-maso tokoa aho rehefa manomboka mandefa ao amin'ny youtube.